यस्तो आदेश आएपछि चर्चित गायिका विष्णु माझीको माइतीघरमा पुग्यो प्रहरी !::The Leader Of Nepal
काठमाण्डौ । तीज विशेष भन्दै गायिका विष्णु माझीले गाएको ’चरी जेलैमा’गीतले पछिल्लो समय चर्चा मात्रै नभएर उनको निजी जीवन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्दै बहस चलेको छ। धेरैले गीत उनकै जीवनको व्यथा भएको तर्क दिएका छन भने कतिले बिष्णु माझीलाई किन यस्तो गरेको होला भन्ने प्रश्न खोजि रहेका छन ।
उनले गएको गीतहरु प्रया बजारमा हिट नै हुने गर्छ । त्यस्तै तीज को अबसर परेर केहि समय आगाडी माझीले गाएको त्यस गीत सबै भन्दा उत्कृष्ट भएको छ । सबै चेलिबेटीको दुख समेटेर गएको गीत बास्तबमै माझीको जिबनमा मेल खान्छ कि भनेर धेरैले आकडा गरेका छन । यो गीतमा उनकै श्रीमान् सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरी गायिका माझीकाे अवस्था बुझ्न आग्रह गरेपछी के हो कुरा भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोली चर्चित लोकदोहारी गायिका विष्णु माझीको माइतीघर चापाकोट पुगेको छ ।
केपी ओली नेताकार्यकर्ताको मनमनमा बस्ने संकेत, योगेश भट्टराईलाई आजै सुम्पिए यति ठूलो जिम्मेवारी !
काठमाडौं उपत्यकावासीका लागि सरकारले जारि गर्यो अत्यतै जरुरि सूचना
काठमाडौं उपत्यकावासीका लागि भर्खरै प्रशासनले जारि गर्यो यस्तो सूचना